Iindaba-Iqela leZishan: Ulawulo lomgangatho kuwo onke amanqanaba ukwenza amanzi okusela asempilweni
Ukuzifudumeza ngokwakho, iMicrowave, ukubilisa
Ukutya okuLwandle okuLotyiweyo
Uthotho lwemifuno exubeneyo
Iziqhamo kunye noCola imifuno
Iqela leZishan: Ulawulo lomgangatho kuwo onke amanqanaba ukwenza amanzi okusela asempilweni
Wu Xiuli, Isikhululo sikamabonwakude saseZhangzhou: Ndiyakholelwa ukuba awuzukungaqhelani nomzi mveliso esiya kuwo namhlanje. Ukusuka kwii-pickles ezisetafileni ukuya kwiziqhamo kunye neziselo zemifuno esihlala sisela, nditsho namanzi okusela ekufuneka siwasele yonke imihla, emva kwam ngumzi-mveliso omkhulu onokuthi ufumaneke kumzi-mveliso. Ewe, yinkampani ehamba phambili kushishino lokutya eZhangzhou, kwiqela laseZishan, ke namhlanje ndiza kulandela amanyathelo entatheli ukuze ndibone ukuba oku kutya kwenziwa njani.
Iqela leFujian Zishan yeyona nto iphambili kuzwelonke. Yayisungulwa ngo-Matshi 1984. Emva kweminyaka engama-30 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, ngoku ineenkxaso-mali ezili-10 kunye neenkampani ezibambeleyo ezineeasethi eziphantse zayi-1 billion yuan. Ivavanywe nguRhulumente waseZhangzhou iminyaka emininzi. "Njengomrhafi omkhulu". Iimveliso zibandakanya ukutya okusemathinini, i-pickles, amanzi amaminerali, iziqhamo kunye neziselo zemifuno, njalo njalo. Ngokwemigangatho yesizwe, amanzi amaminerali kufuneka ahluzwe kwaye abulawe iintsholongwane.
U-Yang Jubin, umphathi we-Zhangzhou Zishan Mineral Water Co, Ltd: Isihluzi samalahle siyilelwe ukuthengisa ukungcola emanzini entwasahlobo. Isihluzi esine-micron ezintlanu, icebo lokucoca ulwelo elinemicron enye kunye nesicoci se-0.22 micron. Ezi zihluzo zinokuqinisekisa ukuba ukungcola emanzini kuhluziwe ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zokuzala, kwaye ekugqibeleni kudlule kule nqaba yokuxuba i-ozone yeSterilize efanelekileyo, emva koko uqhubeke nokuzalisa.
Njengokucoca ukungcola emanzini aluhlaza, yonke imveliso yeZishan kufuneka ihlolwe ngokungqengqeleka ngumaleko.
U-Yang Jubin, uManejala we-Zhangzhou Zishan Mineral Water Co, Ltd: Iqala ngokuvuthela, kwaye ibhotile nganye ihlolwe ngokungqongqo, ibekwe iliso kwaye igcwalisiwe. Inkqubo yokugcwalisa yenziwa ngendlela engenabungozi. Siqinisekisa ukuba yonke ibhotile kufuneka ihlolwe. Ngaphambi kokuba imveliso ithunyelwe, sikwanolawulo lokusemgangathweni ukuqhuba uhlolo kuzo zonke iimveliso.
Ngophuculo oluqhubekayo lweendlela zokuphila zabantu, kukwakho neemfuno eziphezulu zamanzi okusela. Ukuphendula kolu tshintsho lwentengiso, uphawu oluphezulu lweZishanshui Zhuleshanquan lwabakho. Kude kude noxinano lwesixeko, umzi-mveliso waseChengxi eZishan unamahlathi ashinyeneyo. Umthombo wamanzi weNtaba yeZhule Intaba uvela kulondolozo lwala mahlathi oqalo.
U-Yang Jubin, umphathi we-Zhangzhou Zishan Mineral Water Co, Ltd.: Umgangatho wokugubungela uqalo kuyo yonke intaba apha ungaphezulu kwe-90%. Kwelinye icala kukho intetho ethi la manzi atshicwayo ngoqalo abizwa ngokuba "ngamanzi aqatywe ngoqalo." Amanzi e-bamboo apholile ngokukodwa, kwaye i-alkalinity yawo inokunciphisa i-asidi ebuthathaka yomzimba wethu. Emva kokusela amanzi ethu, i-pH inokuhlengahlengiswa ukuze iphumelele.
Kwintengiso yasekhaya enokhuphiswano olunamandla lwamanzi kunye neziselo, iZishan ibisoloko ikwazi ukuhlala ngokuqinileyo endaweni, ubukhulu becala ngenxa yokuqonda ngokuthe ngqo kwintengiso. Umntu ophetheyo kwishishini ukholelwa ukuba kwiimarike zamaminerali ezizayo, iziselo zamanzi ezinempilo ziya kukhuphisana ngakumbi. Ngenxa yokuba abathengi abadingi kuphela ibhotile yamanzi, kodwa kunye nendlela yokuphila esempilweni.
Intatheli yathi: Amanzi yimveliso yabathengi eqhelekileyo. Ngotshintsho oluqhubekayo kubomi babantu, ishishini leziselo linamava ophuhliso olungazange lubonwe. Abathengi ngokuthe ngcembe bachonga ngokucacileyo kwaye bakhetha iziselo ezisempilweni phakathi koluhlu olumangalisayo lweemveliso. Oku kukwathetha ukuba xa abathengi bethenga amanzi ezimbiwa kule mihla, into abayithengayo ayisiyondlela yokonwaba kuphela, kodwa ikwayimbono yobomi esempilweni. . Ndicinga ukuba esi sisizathu esibalulekileyo sokuba amanzi eZishan amaminerali agcine ukuthengisa okuzinzileyo kwimakethi yamanzi okusela iminyaka emininzi kwaye ibe yimveliso echongiweyo yeXiamen Airlines.
Ixesha leposi: Dec-17-2020
Yancuo Idolophu, Zhangzhou, Fujian, PR of China